Ebe aga na ihe iga eme?
Eleghị anya ị maara aha Itaewon, Myeongdong ma ọ bụ Hongdae, mana ị maara n'ezie ụdị ihe ị ga - eme na mpaghara ndị a. Will ga - ahụ na nkọwa blog na ọrụ ndị a maka mpaghara ndị ama ama na kacha ewu ewu na Seoul! Yabụ, ọbụlagodi ma ọnụnọ na Seoul dị mkpụmkpụ, ịnwere ike ịhọrọ ebe ịchọrọ ịga na ihe ndị ịchọrọ ime ebe ahụ!
Hongdae bụ ebe kacha mma maka ndị na-eto eto na-eleta Seoul. Mpaghara ụmụ akwụkwọ a dị nso na Mahadum Hongik ma ị ga - ejikwa ụzọ ụgbọ oloko, akara 2 gaa leta ebe a na - ekpo oke ọkụ. Ga-ahụ ọtụtụ ihe ị ga-eme, site na ịzụ ahịa na karaoke, rue iri nri dị ụtọ n'ụlọ nri, nke a na-akwụkarị nnukwu ego. Ọtụtụ oge, ị ga - enweta ohere iji nyere ndị na - anya ụgbọ elu ma ọ bụ ndị na - agba egwu aka na - eme ụfọdụ ọrụ egwu dị egwu na kpop. A na-enwe ekele maka mpaghara a n'etiti ndị njem, kamakwa n'etiti ndị na-acha odo odo. Nwere ike ịga n’ehihie ma ọ bụ n’abali, ị ga-ahụ ihe ndị na-atọ ụtọ ị ga-eme.
Banyere Itaewon, ugbu a bụ mpaghara kachasị mma na Seoul na ọbụna karịa mgbe akpọghachiri ihe nkiri a ma ama "Itaewon Class" nke mere ka ndị njem nleta na mpaghara ahụ karị. Itaewon bụ mpaghara ụwa niile ị nwere ike ịchọta ụlọ oriri na ọ fromụ fromụ n'akụkụ ụwa niile, ngwakọta nke ọdịbendị na okpukpe dị iche iche. N'ezie ị nwere ike ịchọta ụlọ alakụba mbụ nke Seoul dị na Itaewon, nke nwere ụlọ ahịa ndozi na ụlọ nri. Mana nke kachasị, Itaewon bụ onye ama ama maka oriri na nkwari. N'ezie enwere ọtụtụ Ogwe, klọb na kara karat. Ọ bụ ya mere ndị mba ọzọ na ndị Korea ji hụ obodo a n'anya.
Myeongdong bụ ngalaba aga-agagharị ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụ ahịa ma wetara ndị enyi na ndị ezinụlọ gị ihe ncheta na onyinye. Dị ka o kwesịrị ịdị, ị nwere ike ịchọta ihe niile ịchọrọ na ebe ahụ na ọtụtụ! Maka ndị hụrụ ihe ịchọ mma n'anya, nke a bụ paradaịs gị, ebe ọ bụ na ha dị ọtụtụ narị ụdị sitere na ndị ama ama na ndị na-amaghị ama. You ga acho ihe obula ichoro. Na akụkụ kachasị mma na ya, bụ na enwere nri n'okporo ụzọ gburugburu gị! Nwere ike ịnụ ụtọ ịzụ ahịa mgbe ị na-eri nri ọkụkọ mbụ ị nwetụbeghị, dịka achịcha Egg ma ọ bụ Tornado Potato.
Gangnam pụtara n'ụzọ nkịtị 'ndịda osimiri, dịka ọ dị n'okpuru Osimiri Han. Gangnam bụ ebe ejiji, oge na etiti nke Seoul nwere ọtụtụ ebe nkiri gụnyere ụlọ ahịa, ụlọ nri na skyscrapers. Gangnam bụ onye ama ama maka ndị hụrụ ịzụ ahịa. You nwere ike ịchọta nnukwu ụlọ ahịa dị ka COEX, na aha ndị nwere ọkwa dị elu. Ọ bụrụ n’inwere mmasị na egwu ndị Korea (K-pop), inwere ike ịchọta ọtụtụ ụlọ ọrụ Kpop dị ka Bighit Entertainment, SM Town, JYP Entertainment… lifelọ oriri na ọ alsoụ Nightụ nọ n'ógbè ahụ na-ejikwa ọrụ n'aka ma na-enwe ọcụ na ebe a na-eme oriri na nkwari abalị, na-eme ka mpaghara a bụrụ ezigbo ebe ị ga-egwu egwu ma nụ ụtọ ndụ ruo chi ọbụbọ!
COEX na Gangnam
Osimiri Han na gburugburu ya dị n ’etiti Seoul na-ekewa obodo ahụ na abụọ. Ọ bụ ebe ndị ama ama ama ama maka ndị bi n'isi obodo ahụ. Ebe a bu ezigbo uzo njem Obere njem n’enweghi nkasi ike njem gi. Nwere ike izu ike ma soro ndị ezinụlọ gị, ndị enyi na ndị ị hụrụ n'anya nọrọ n'ọmarịcha ogige ọtụtụ ogige dị gburugburu. Maka oNdi mmadu choro otutu ihe ozo nke agha adrenaline, inwere ike igha egwuri egwu nke mmiri ma obu igwe ugbo ala nke ndi ozo. Nke ozo bu na oburu na agu guru gi, inwere ike inye gi nri gi n’uzo!
Mpaghara Insadong, emi odude ke ufọt obio Seoul, A maara nke ọma n'etiti ndị mba ọzọ maka ọtụtụ ụlọ ahịa na ụlọ nri ya. N’elu ihe niile, a mata ya maka okporo ụzọ ya na ikuku jikọtara ọnụ na ọnọdụ ikuku ị nwere ike ịchọta ebe ahụ. Ọ bụ mpaghara pụrụ iche nke Seoul na-egosipụta ihe ngosi oge niile nke South Korea. Na gburugburu district Insadong, ị nwere ike ịchọta obí eze site na oge Joseon. Art nwekwara ebe kachasị na Insadong. Ọtụtụ veranda na-egosiputa ụdị nka nka site na eserese ọdịnala ruo n'ihe ịchọ mma nwere ike ịhụ ebe niile. Ọzọkwa, ụlọ tii na ụlọ nri ọdịnala bụ ebe zuru oke iji mezue nleta nke mpaghara a ..
Written Site Soukaina Alaoui & Caillebotte Laura
Share on FacebookShare on Facebook TweetShare on Twitter Share on WhatsAppShare on WhatsApp tụgide yaShare on Pinterest Share on LinkedInShare on LinkedIn